रक्तदानमा अजयको आत्मसन्तुष्टि - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
२०७५-१०-८ बिचार / प्रतिक्रिया
भनिन्छ सुख खोज्न कतैं गई राख्नुपर्दैन । मनको सन्तोष भित्र सुख लुकेको हुन्छ । आफू सुखी रहने चाहना जो कसैंको हुन्छ । र त्यो सुखी रहने चाहना खोज्दैं मानिसको दैनिकी अघि बढिरहेको हुन्छ । र त्यो सुख भित्र आत्मसन्तुष्टि लुकेको हुन्छ । र कतैं आत्मसन्तुष्टि भित्र मानिसको सेवा भाव पनि छिपेको हुन्छ । र त्यस्तैं सेवाभावका साथ अघि बढिरहेका एक पात्र हुन् अजय सत्याल । उनी रक्त दान गर्दा खुशी हुन्छन्, एक पटक रक्तदान गरेपछि फेरि कहिले रक्त दान गर्ने समय आउछ भनी कुरेर बस्छन् ।
सत्याल अमेरिकाको फ्लोरिडामा बस्छन् । सन् १९८४ मा अमेरिका आएका उनले १९८६ देखि नियमित जसो रक्तदान गरिरहेका छन् । ३१ वर्षको उमेरदेखि रक्तदान गर्न थालेका उनी अहिले ६५ वर्षका भए । उनले हालसम्म १ सय ६३ पटक रक्त दान गरिसकेका छन् । रक्तदान गर्न सुरुगरेदेखि अहिलेसम्मको यो अवधिमा रक्तदान पनि उनको लागि नियमित काम जस्तैं बनेको छ । २०२६ सालतिर १५ वर्षको उमेर आफ्ना भिनाजु डा. धनञ्जय रिमालमार्फत रक्तदान बारे ज्ञान लिएका उनले रक्तदान भने अमेरिका आएपछि मात्र सुरु गरे । आफ्ना माइला दाजु प्रमोद सत्याल (शर्मा) मार्फत एक वनभोज कार्यक्रममा सहभागि हुदैं त्यही ठाउ“मा उनले पहिलो पटक रक्त दान गरेका थिए ।
रक्तदान बारे ज्ञान त थियो तर दिएको भने थिइन् । आफ्नो सुरुवातको रक्तदान गर्दाको समय सम्झदैं उनी भन्छन् – माइला दाजुले भनेपछि रक्त दान गरे, अनि मात्रैं मेरो रगत ए पोजिटिभ रहेछ भन्ने थाहा भयो ।
उनलाई अहिले रक्तदान नियमित क्रियाकलाप भित्रको एउटा पाटो जस्तो भएको छ । सुरु सुरुमा त डर लाग्थ्यो, तर विस्तारैं बानी पर्दै गयो । उनले भने अहिले त रक्तदान गरेको दिन देखि रक्तदान गर्न फेरि कहिले पाउ“छु जस्तो लागिरहन्छ ।
१ सय ६३ पटक रक्तदान गरिसक्दा सत्याललाई १/२ पटक फेन्ट भएको याद छ । राम्ररी पूर्व तयारीबारे नजान्दा र दिएपछि के गर्ने भन्ने बारे थाहा नहुदा १/२ पटक फेन्ट भएको थिए । उनले भने –एक पटक त कुर्चीमैं फेन्ट भएछु, र अर्को पटक मलाई याद भए अनुसार रक्तदान गरेर भ्यानबाट निस्किएपछि भएको थिए, भोको पेट थिए त्यसैले त्यस्तो भयो होला तर त्यो समान्य थियो ।
आफूले रक्तदान गर्दा त्यसवाट कम्तिमा ३ जनाको ज्यान जोगाउन सकिने तथ्य बुझ्न सक्दा सेवाको अर्थ थाहा हुने र यसमा लाग्न उत्प्रेरणा मिल्ने उनी बताउछन् । रक्तदान मानवीय सेवाको पुण्य दान मात्र नभई स्वयं रक्तदाताको स्वास्थ्यको लागि समेत फलदायी हुनेमा सत्याल जोड दिन्छन् । रक्तदान गर्ने रक्तदाताको स्वास्थ्य परिक्षण हुन्छ ।
यसले स्वयं रक्तदाताले आफ्नो स्वास्थ्य वारे अपडेट भैरहन पाउछ । उनले भने – सेवा मात्र नभई यसमा हामी रक्तदाताको स्वार्थ पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
अमेरिकामा मात्र नभई नेपालमा जादासमेत उनी संभव भएसम्म रक्तदान गर्न छुटाउ“दैनन् । त्यसो त सत्यालले भारतको बैगलोरमा गएर पनि रक्तदान गरेका छन् । उनी त्यसलाई एउटा मेमोरीकैं रुपमा सजायका छन् । सत्यसाईका भक्त भएकाले सपरिवार बैंगलोरको पुट्टपर्ती साइदर्शनका लागि सन् २००८ मा गएका थियौं । विगत सम्झिदैं उनले भने – त्यहा सत्यसाइ प्रतिष्ठानले चलाएका्े अस्पताल छ, विहिवारको दिन थियो त्यहा पनि रगत चाहिएको खवर आयो, अनि मैले त्यहा पनि रगत दिए, त्यो मेरो लागि एउटा सम्झन योग्य पल थियो ।
त्यसो त उनी हरेक पटक आफूले गरेको रक्तदानलाई आफ्नो दक्षताले भ्याएको सेवा ठान्छन् । उनी यसलाई अहिले नियमित कार्यसूचीमै राखेका छन् । हरेक साता उनी रक्तदान केन्द्र जान्छन्, स्वास्थ्य जाच गर्छन्, दिन मिल्ने समय भएको रहेछ भने रक्तदान गर्छन् नभए अरुलाई उत्प्रेरित गर्न पनि त्यहा वस्छन् ।
नियमित रक्तदान गरिरहेका उनी रक्तदातास“गसगैं रक्तदान गर्न उत्प्रेरित गर्ने अभियानमा पनि सक्रिय छन् । आफ्नो सम्पर्कमा रहेकालाई उनी रक्तदान गर्न आग्रह गर्छन्, यसका फाइदाबारे बताउछन् र उत्प्रेरणा दिइरहन्छन् । सत्याल इन्टरनेशनल नेपलिज ब्लड डोनर्स एशोसिएसशनको प्रेसिडेन्ड पनि हुन् । यो संस्थाले हाल विश्वका १७ मुलुकमा आफ्नो संजाल विस्तार गरेको छ र रक्तदानका लागि सचेतना फैलाइरहेको छ । उनी अमेरिकामा सक्रिय ब्लड डोनर्स अफ अमेरिकामा पनि उत्तिकैं सक्रिय छन् ।
उनका परिवारका अन्य सदस्य श्रीमती, छोरा र छोरीले पनि रक्तदान गरेका छन् । रक्तदान गर्न सक्ने अवस्था रह“दा सम्म रक्तदान गरिरहने सत्याल बताउ“छन् । उमेरले रक्तदान गर्नकहा छेक्छ र ? सत्याल विश्वमा सर्वाधिक पटक ३ सय ६० पटक रक्तदान गरेका ८७ वर्षीय जोन सेफर्डको उदाहरण दिदैं भन्छन् – उहाको उमेरको तुलना गर्दा त मैले अझ धेरैं वर्ष दिन पाउछु जस्तो लाग्छ । रक्तदान गर्न उमेरले रोक्दैन पनि र सक्दासम्म दिइरहन्छु । सेफर्ड उनकैं घर नजिक बस्छन् जसले गर्दा पनि उनी आफूलाई अझ उत्प्रेरणा मिलिरहेको बताउछन् ।
नेपालमा पनि अहिले रक्तदान गर्ने क्रम बढिरहेको र यो अभियान जस्तैं बनेको उनी ठान्छन् । तर नेपालमा जानेर वा नजानेर उमेरको कारण देखाउने देखि रक्तचाप, मधुमेह लगायतका रोगको दबाइ खाएकाहरुले दिन पाउ“दैंनन् जस्ता विभिन्न कारण देखाएर रक्तदान गर्न नदिइने गरेकाले त्यसलाई चिर्न एउटा चेतनामुलक अभियानकैं रुप अघि बढाउन जरुरी भएको उनी देख्छन् ।